29 / 04 / 2020 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Abriil 29, 2020
USS waxay ku laabatay Dekadda Kidd, oo loo Xaqiijiyay inay leeyihiin Xaalado COVID-19
Bayaan dhowaan ay soo saartay Pentagon ayaa lagu xaqiijiyay inuu ka dillaacay COVID-100 gudaha USS Kidd (DDG-19), mid ka mid ah baabi'iyayaashii fasalka Arleigh Burke ee ciidamada badda Mareykanka. Xaaladda guud, Maraakiibta Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in markabka uu ahaa [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha Ayaa Bilaash u ah Shaqaalaha Farmashiyaha laga bilaabo 1da Meey Magaalada Bursa
Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa waxay sii waddaa inay ka taageerto shaqaalaha caafimaadka. Ka dib faafitaanka cudurka 'corona virus', ka dib adeegsi bilaash ah ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada, waxaa loo sameeyay farmashiistayaasha go'aan. Bursa Metropolitan [More ...]
210 Kiiloomitir oo Jid-howleedyada ah ayaa Sanadkan lagu sameyn doonaa Gaziantep
Dowladda Hoose ee Gaziantep waxay billowday howlo waddo oo la qorsheeyay kuleylka cimilada. Xaaladda guud, Magaalada Metropolitan, sanadka 2020, wadar dhan 110 kiilomitir oo kulul ayaa damacsan bartamaha magaalada iyo 100 kiiloomitir oo dusha sare ah oo daboolaya xaafadaha miyiga. [More ...]
Madaxweynaha Imamoglu Alibeykoy Wuxuu Sameeyay Taariikhda Khadka Eminonu Tram
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu baaritaano ku sameeyay wadada Alibeyköy - Eminönü Tram Line, oo ay ahayd in laga jabiyo 1,3 km aagga iyadoo ay ugu wacan tahay burburka dhulka. Pelin Alpkökin, Madaxa Waaxda Nidaamka Tareenka, waaya-aragnimo kahor intaan shaqada la galin [More ...]
İBB Waxay Sii Wadaa Shaqooyinka Nadiifinta ee Adalar
İBB waxay sii wadaa howlaheeda nadaafadeed ee Adalar ee ka dhanka ah coronavirus. Wadarta 32 shaqaale ah ayaa ka shaqeeya howsha, kuwaas oo dhaca laba maalmood usbuucii. Gawaarida dharka lagu dhaqo ayaa sidoo kale loo diraa Adalar markii ay codsato degmadu. coronavirus [More ...]
Qorshaha Gaadiidka Dadweynaha ee Izmir May 1-3 waa Diyaar
Qorshe gaadiid dadweyne ayaa loo diyaariyay Bandowga 1-da Meey ee Izmir. Basaska ESHOT, Metro iyo TCDD - Degmada Izmir ee Magaalo Weynaha waxay adeegyo gaadiid dadweyne u fidisaa kooxaha xirfadlayaasha ah iyo shaqaalaha. [More ...]
Bayaanka Suuqa Beeraha Dijitaalka ah ee uu soo diray Wasiir Pekcan
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu sheegay in la adeegsiga "Suuqa Beeraha Dijital ah", in la abuuri doono qaab wax soo saar oo aad loo sii qorsheeyay lana saadaalin karo helitaanka kuwa wax soosaarka yaryar u keenaya suuqa. [More ...]
Dhismaha Madaarka Atatürk iyo Cisbitaalada Sancaktepe ayaa sii socda
Dhismaha laba isbitaal oo gaaraya 1008-sariirood oo laga dhisayo garoonka diyaaradaha ee Atatürk iyo Sancaktepe ee magaalada Istanbul ayaa si isdaba joog ah u socda. Isbitaalka Milatari ee taariikhiga ah ee Hadımköy, oo hadda dib u dhis lagu sameynayo, ayaa la filayaa inuu furmo ka hor 24ka May, XNUMX-ka May. Istanbul [More ...]
Bisha Maajo Taariikhda Gunnada Shaqo La'aanta oo La Bilaabay Biximaha
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Sel announceduk ayaa ku dhawaaqday inay bilaabeen bixinta lacagta shaqo la aanta. Iyada oo la eegayo baaxadda tallaabooyinka ka hortagga coronavirus, faa'iidooyinka shaqo la'aanta ayaa lagu keydin doonaa koontada ka-faa'iideystayaasha bishaan sidoo kale. [More ...]
1 milyan 515 kun 47 qoys ayaa ka faa iidaystay taageerada isticmaalka korantada hal sano gudaheed
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa sheegtay in 2019 milyan 1 kun 515 qoys ay ka faa iideysteen taageerada isticmaalka korontada ee la bilaabay sanadka 47 muwaadiniinta u baahan. Turkey ee bulshada [More ...]
Xagee laga furi doonaa xayiraada bandoowga 3 maalmood ah ..? Waa kuwan faahfaahinta
Wasaaradda Arimaha Gudaha ayaa u dirtay "Wareegayaga Xayiraadda Wareegta" 81 Maamulayaal Degmooyin iyadoo loo eegayo sida loola dagaallamayo nooca cusub ee Kovid 19. Wareegtadan, 30kii Abriil ee Zonguldak oo leh 30 gobol oo metelaad magaalo ah [More ...]
Tallaabooyinka Coronavirus waxay yareynayaan Dilka Haweenka
Sababo la xiriira nooca cusub ee coronavirus (Kovid-19) faafa, waxaa 11% hoos u dhacay dilalka haweenka tan iyo 45-kii Maarso, markii tallaabooyin laga qaaday dalka oo dhan. Qoyska iyo [More ...]
CEVA Logistics ayaa isku dubarida shixnadaha alaabada muhiimka ah ee loo raro xarunta GM wax soo saarka ee USA ee Kokomo, Indiana, adduunka oo dhan. Thanks to qorshaynta, isuduwidda iyo xirfadaha fulinta ee kooxaha CEVA Logistics [More ...]
Miyaan laga soo iibsan karin Gawaarida Diyaaradaha Magaalada Istanbul Bursa?
Maanta, markii wax soosaarka gudaha iyo qaranku aad looga hadlo, ayaa wargeysyada ka soo baxa wargeysyada ay soo jiiteen shalay. Maanta, waxaan ku faraxsanahay unugyada neefsashada ee gudaha oo ay sameeyeen 4 shirkadood muddo labo toddobaad ah iyo aaladda sawirada qaran ee ay soo saartay ASELSAN. [More ...]
Dakhliga Buundada iyo Wadada Weyn ee Bisha Maarso!
Wadarta Dakhliga laga soo bilaabo Maarso waxaa shaaciyey Agaasimaha Guud ee Wadooyinka. In kasta oo dagaalka ka dhanka ah cudurka faafa ee coronavirus uu sii socdo, tillaabooyinka la qaaday iyo bandowgu ma saamaynayaan buundada iyo dakhliga ka soo gala Istanbul. [More ...]
A400M Diyaaradda Gaadiidka Militariga Atlas Namı Kale 'Koca Yusuf'
Ciidamada maanta jira waxay u baahan yihiin qalab dabacsan oo dhaqaale oo ku habboon si dhakhso leh loogu qaado loona keeno shaqaalaha iyo kheyraadka. Baahidaas waxaa la fuliyay 1997, sideed wadan oo reer Yurub ah, dhamaan xubnaha NATO. [More ...]
Dhaqanka Ganacsiga Ganacsiga waa in laga Bilaabayaa Talaalka iskuulada
Bixiya ardayda dugsiga sare oo caalamka ah fursad uu ku waayo-aragnimo ganacsi gacan koowaad iyo Turkey ayaa markii ugu horeysay sanadkan lagu qabtay Izmir Aegean Young Business Association Dadka barnaamijka iskaashiga Diamond Challenge Covidien-19 [More ...]
Waqtigii U Danbeeyay ee Wadada Wadada Cas ee Magaalada Istanbul Waa La Balaariyay
Saacadihii ugu dambeeyay ee duullimaadyada metrooga ee magaalada Istanbul ayaa la kordhiyay; Bayaanka ay soo saartay Metro Istanbul, waxaa lagu shaaciyey in adeegyadii ugu dambeeyay ee metrooga ee dhammaan khadadka la cusbooneysiiyay 21.00 maxaa yeelay suuqyadu waxay shaqeeyeen ilaa 21.30. Duulimaadka Metro Istanbul [More ...]
Soojeedin Dheeraad ah oo Dheeraad ah oo loogu talagalay Maalgashiga Farsamada Sare ee OIZs
Nadir Küpeli, Gudoomiyaha gudiga Eskişehir abaabulay soonaha warshadaha, wuxuu cadeeyay in SMEs ay yihiin shirkadihii ugu dhib badneyd muddadan wuxuuna cadeeyay in qeexida SMEs waa in la cusbooneysiiyaa. Sare in lagu sameeyo OIZs fayow [More ...]
Qulqulka Eurasia oo leh Dammaanad Ku-meelgaar ah Gobolka ma ugu gudbi karaa awood Majeure?
Sözcü Qoraaga Wargeys Çiğdem Toker wuxuu la wadaagay macluumaadka ah in cudurada faafa loo arko in ay yihiin cudud qasab ah oo ku jirta qandaraaska lagu saxiixay Tunis Eurasia, sidaa darteed Wasaaradda Gaadiidka waxay xaq u leedahay inay joojiso heshiiska. 'Wadashaqayn gaar ah oo dowladeed' magaca [More ...]
Miyaa dib loo dhigay Taariikhda Furitaanka Garoonka Diyaaradaha Rize Artvin?
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha 766 hektar oo aasaas u saadaaliyey la dhigay saddex sano ka hor, Turkey waa la dhisi doonaa badda ku qabanaysa garoonka 3nd, Rize- Artvin Inkastoo shaqada dhismaha sida Airport dillaacay coronavirus [More ...]
Hawada Istanbul ayaa la nadiifiyey intii lagu gudajiray Nidaamka Faafida
Sida laga soo xigtay xogta Agaasinka Ilaalinta Deegaanka ee IMM, wicitaanada #evdekal, haddii aysan waajib ku ahayn inay bannaanka u baxaan, waxay keeneen nadiifinta boqolkiiba 30 nadiifka hawada magaalada Istanbul. Tan waxaa lagu gaaraa maalin kasta aalado leh heerar tixraac caalami ah. [More ...]
Tareenka shanaad ee maglev ee ay soo saarto shirkadda Shiinaha ee CRRC ayaa si guul leh ku dhammaystirtay tijaabooyinkeedii ugu dambeeyay. Iyada oo ay ugu wacan tahay tijaabadii lagu sameeyay magaalada Tangshan, waxaa lagu shaaciyey websaydhka shirkadda in xawaaraha 160km / saacaddii la gaadhay. Marka la barbar dhigo nidaamyada maglev ee kale [More ...]
Khadka Internetka ee Ardayda Magaalada Metropolitan ee Izmir, Xidhmada Hadalka mudo 65 sano ah iyo wixii ka sareeya
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay siisaa 18 GB xirmo internet ah ardayda waxeey da'doodu u dhaxeysaa 20-4, kuwaas oo lagu taageeri doono bandowga. Codsiyada waxaa lagu sameyn karaa aaladaha dijitaalka ah ee Bizİzmir. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay cabirtaa la dagaalanka cudurka Coronavirus [More ...]
Injineerka Nidaamka Tareenka ee Yurub
Iyada oo la adeegsanayo Mashruuca Erasmus + (KA203) oo ay si wada jir ah u qoreen ardayda Kulliyadaha Qalabka Injineeriyada ee Karabuk iyo xubnaha kooxda mashruuca ee Dhallinyarada Qaranka (UGA), isu-dheelitirka waaxda injineeriyada Rail Systems ee Yurub waa la hubin doonaa. Mustaqbalka [More ...]
Daqiiqada ugu dambeysa: Waxaa jiri doona bandow 15 Magaalooyin ah maalmaha Sabtida iyo Axadda
Qolal Wadahadal halkaad ka heli karto natiijooyinka ugu caafimaad badan
Liiska Serin2 Pvp Servers Liiska hadda ah
Xilliga internationka on-line ayaa bilaabmay
Daqiiqadii ugu dambeysay: Qaar ka mid ah Tallaabooyinka Coronavirus waa la saaray